Ikhoyili Lashukumisa, Galvalume Steel Ikhoyili, Ppgi Ishidi - Lueding
Izitifiketi ze-BV, i-ISO kanye nokuhlolwa kwe-SGS kunganikezwa ukuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo yethu.
Singumkhiqizi futhi sinefektri yethu, ungathola intengo yokuncintisana ngekhwalithi ephezulu.
Ukwaneliseka kwamakhasimende ukuphishekela kwethu! Idumela elihle kule mboni ngenxa yemikhiqizo nensizakalo yethu esezingeni eliphakeme.
U-Hebei Lueding Imp. & Exp. Co., Ltd.isenyakatho yedolobha laseChina-Shijiazhuang, eduze naseBeijing. Sihlinzeka ngobuchwepheshe i-PPGI, ikhoyili yensimbi ehlanganisiwe, ikhoyili yensimbi i-Al-zinc, amashidi okufulela ngothayela nemishini yokwakha roll. Ifektri yethu isiqalile ukukhiqiza i-PPGI, ikhoyili yensimbi ehlanganisiwe, ne-Al-zinc steel coil kusukela ngo-2003, futhi yaqala ukukhiqiza amashidi ophahla lukathayela kusukela ngo-2010. Manje sesithumela izinto zethu zodwa kusukela kulo nyaka. Umsebenzi wenkampani yethu ukusebenzela amakhasimende njengozakwethu, ukusekela amakhasimende ngezimpahla ezisezingeni eliphakeme ngamanani aphansi. Inqubomgomo ebaluleke kakhulu kithina ukuthi “Isikweletu yinqubomgomo eyisisekelo futhi ehamba phambili.” Imakethe yethu eyinhloko iSoutheast Asia, Middle-east, Africa, Japan, kanye namazwe aseNingizimu Melika. Ngiyethemba ukukhula nawe ndawonye !!! Siyakwamukela futhi sibheke phambili ekusekelweni kwakho kwaphakade!
16 Okthoba, 20
I-128th Online Canton FairFika egumbini lethu lokuphumula Imikhiqizo yethu eyinhloko: I-GI Coil / Gl Coil / PPGI Coil / Roofing Sheet njll Ikheli Lokuhlala: https://ex.cantonfair.org.cn/pc/zh/exhibitor/4ab00000-005f -5254-e31d-08d7ed7aefee Isikhathi esibukhoma: Okthoba 15th -24t ...
Lashukumisa Steel Ikhoyili Market ngu Abadlali Top Key, Si ...
Julayi 28, 20
Indawo Yemakethe Yensimbi Yensimbi Ehlanganisiwe Inikeza Ukuhlolwa okuningiliziwe mayelana nazo zonke izici ezibalulekile maqondana nemakethe. Ukuhlaziywa komnotho we-Global Galvanized Steel Coil, kunikeza imininingwane ejulile maqondana ne-Coin Steel Coi ...